April 7, 2008 ku "Isiteshi Okokuqala" waba yacala dvenadtsatiseriyny hlola Saga "Umphostoli." Kwakuyisikhathi esishubile, indaba sina mayelana kwesimo phakathi kwe-ejensi ezimbili intelligence - "Abwehr" kanye NKVD - ngo-1942. Uchungechunge oluthi "Umphostoli", abadlali okuyinto cwilisa bedubula, izimpi enobudlova, imoto emsukela, futhi emlandweni wesintu ukuze kusindiswe abantu ababathandayo, ngokushesha wathandwa izinhliziyo izigidi ababukeli.
Lena brand new zonke izimiso cinematic hlola Thriller kanyekanye walwaphula amarekhodi kwi izilinganiso. Saga "Umphostoli", abadlali lapho ababekhethiwe ngokucophelela, riveted ukunakwa izilaleli lapho izinhlamvu ezimbili: hero UNikolai Fomenko - uhlobo lobulwane, "umfana ezinzima" Alexei Ivanovich Khromov (uCaptain uMnyango KaHulumeni Wezokuphepha) futhi iqhawe Yevgeny Mironov - elicwengisiswe bokusungula Skinny lowo ngokusho indaba, Paul iba Istomin superman.
Abanye abaculi owaba nengxenye ekudalweni yalesi Thriller, kakhulu, hhayi kancane abanamakhono nabadumile - Daria Moroz, Yuri nazarov, Alena Babenko, Larissa Malevannaya Sergei Bystrytsky, Andrey Smirnov, u-Alexander Bashirov ... Umbukiso kwaba okuningi isigcawu okukhulu, ngakho abadlali kwadingeka ukudlala ezimweni kunalokho kakhulu - run, ukubhukuda, enze stunts. Kodwa, naphezu yinkimbinkimbi, akekho kubo bakhonona, ephendula zonke izingcingo efaneleyo iqondiswe kanye nomsebenzi ehlelekile.
Lonke icebo Saga "umphostoli" lisho abadlali bayizingcweti izikebhe zabo, ithuthukiswe ngempela nonlinear. Sisho - isiphetho nzima kwezelamani ezimbili ayiwele naye, umgwaqo lapho slushkom yokuhlukanisa okukhulu kakhulu ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe. Ngo uchungechunge imidwebo ngamunye izinkumbulo lushelele protagonists namaqhawe, njalo bephethe kwabo esikhathini esidlule, ngoba, uma impilo elokuthula bajabule.
Lona ngumlando eyinkimbinkimbi kakhulu, okuyinto eye ibhalwe ngesisekelo. Kukhona multi-step wokusebenza NKVD ikhadi imfihlo ngokumelene "Abvera" intelligence aqinile. Ngeshwa, kwakungekho abalimala. Abathunjwa zalezi zenzo indoda elula Soviet nomkhaya wakhe. Security amaphoyisa wabanjwa ngokucophelela ku hook protagonist, uyasithembisa, uma engazihlanzi sigcwalisa umgomo wabo ukubhubhisa nomkakhe nengane.
Umugqa esiqintini uchungechunge
Ngakho, sike esiphethweni liyini iqiniso ngemuva zonke kubonisa ukuthi "Umphostoli", uchungechunge ithelevishini. Abalingisi Akumangalisi organically angena ngaleyo nkathi, ukudlala egqamile futhi ngisho ngokweyisa.
Izinhlamvu oyinhloko ifilimu kukhona abazalwane ababili abayizishosha efana nomunye like ezimbili amathonsi amanzi awakhuphule - uPetru noPawulu Istomin. Omunye wabazalwane - Petro - German kwesimo endaweni-mcekeli phansi. Yayo iqembu nabanye saboteurs ezimbili aphonse eSoviet Union ngo-1942, ebusika. Futhi njengamakhiwane umyalo German enikeziwe for lungene zimo kungenzeka, kodwa ... Kodwa ke awuhambanga njengoba kwakuhleliwe, watshala iqembu eyonakalisayo. Futhi yilokho okwenzekile: omunye saboteurs isibongo Marchenko pilot esingu ngqo indiza, bese wabulala mcekeli phansi yesibili futhi umsindo ovala izindlebe wokudubula igalelo isibhamu yesithathu - Peter Istomin. Peter uphatha ngokuyisimangaliso sokusukuma futhi agxume aphume endizeni. Kubonakala kuye ukuthi ubalekile, kodwa cishe ngokushesha uthola "ezandleni" we NKVD.
Yilokho indaba iqala kanjani ukutshela zonke "Umphostoli", uchungechunge ithelevishini, aqukethe Izibuyekezo sibonga efudumele ukuze abaculi. Abalingisi kuthiwa ngakho esasile abadlala indima ngaleso sikhathi-ke kwabonakala sengathi lokhu akuyona umdlalo kanye empilweni yangempela.
Petr Istomin wanquma abaleke. Nakuba bezama ukubaleka, nguye (kwacaca ukuthi, wayeyisela Russian emthethweni) uyafa. Cheka osidinga ngokuphuthumayo ukuze uthole lonke saboteurs. Bafuna usizo yomfowabo twin Peter - UPaul. Paul akuhambisani okuphambene abungafaniko, ukuziphatha, ngokuvumelana nezimiso zakhe kuPetru. Kodwa unamanye ukungena umdlalo ebulalayo, okwakuthi ophumelele nguye ngeke bawenze kahle umsebenzi wabo bangcono kunabanye. Ngakho, amaphutha Kuzodingeka ngiqondise izigwegwe omunye umzalwane kwenye.
Abadlali yochungechunge "Umphostoli", ababedlala izindima ezimbili ezinkulu babe osaziwayo. Kodwa ngokudubula kule filimu usanda izimbali ezinhle e "sezimbali" yabo enkulu lokudala.
Istomin abafowethu - uPetru noPawulu - anguye eyadlalwa Yevgeny Mironov. Kamuva, wangitshela ukuthi ezihlakaniphile uPawulu kancane kancane olubunjiwe impisi efanayo oyedwa, njengoba kwaba umfowabo. Njengoba-ke wahlukana umndeni yakhe ayithandayo, wayazisa ukwedlula ukuphila. Umlingisi uqinisekile Oleg Antonov wabhala isithombe omuhle kakhulu simo, ngoba sasiwumsebenzi MNOGOseriynoye movie, efana naleyo eyabhalwa wathwebula eSoviet Union, lena indaba aphakanyisiwe ukuphila ngokwako. "Umphostoli" - kwaba ucingo sikaPawulu. Futhi kwakungeyona kangaka ekulweni kwakhe ngenxa yalokhu kunqoba nhlobo, njengoba i-sihlangane nomndenakhe - unkosikazi wakhe nendodana yakhe.
Abadlali of the ifilimu "Umphostoli" (Russia), izigcawu eziningi wasebenza ngaphandle ukubandakanywa usizo kabili. Uma wenza amafilimu ukuthunjwa isitimela yesehlakalo, Mironov bagxumela ophahleni izimoto.
Mironov futhi Fomenko emlilweni
Uma Yevgeny Mironov futhi UNikolai Fomenko (uhlamvu Alexey Khromov) ukuthi wacishe wambulala ngomlilo ngo imoto Antique Gaz M-1. Lapho lesi sigameko senzeka kwelinye ithatha, kusukela ngaphansi hood imoto yawa phansi umthombo izinhlansi elikhanyayo nezikhatha zomusi. Ngemva nje kancane kwalokho kwatholakala ukuthi e motor ashisiwe wiring. ngokushesha kakhulu ukuqala ukumvuthela umlilo ucime ngazo zonke izindlela ususondele. Ngakho ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze wonge isikhathi, amatilosi banquma ukungayisebenzisi nhlobo ukulinda kuze kube "engibaziyo" ubudala isilungisiwe. Kwasendulo RV nje ngabophela intambo eqinile kuya "Citroen" nangesibindi dosnimali izincwadi ezidingekayo.
Abvershkola e sezindela
Uchungechunge oluthi "Umphostoli", nabalingisi indima is zashaya ihlombe yizigidi izibukeli, wadutshulwa ezindaweni ezihlukahlukene. Ukuthwebula omunye izigcawu ukhiye esenzeka St uCyril-Belozersky Monastery. Futhi, ngokuvumelana simo, zonke isenzo senzeka ngo abvershkole. Kuyinto e nezindonga zawo ezigebengwini abavamile Soviet kusukela ozinikela besosha amaSoviet, nezinye ubuntu eziningi siyinqaba-nomqondo yezwe amaJalimane babelungiselela saboteurs. Abadali yochungechunge utshele izintatheli ikuyo yonke indawo ukuthi abantu bendawo kanye ukuzingela omkhulu bavumelana indima yabo "siqu", kodwa play yama-Jalimane Uyavuma ukungasebenzisi konke.
On endaweni Isigodlo, egcekeni lejele, yayakhiwe umbhoshongo, ngocingo oluhlabayo kocingo. Kukhona futhi hung amafulegi amaNazi. Futhi esikhundleni izithonjana ibekwe isithombe Hitler.
Explosion, ukhanyisa, izimpaphe ...
Naphezu kwalezi zimo ezinhle ezivuna nempikiswano inqubo sokudubula, lo abenzi mafilimu bebelokhu, futhi inombolo ezanele kwezithibelo lapho besebenza ezivulekile Museum. Ngokwesibonelo, kuvinjelwe ukudutshulwa imiphumela pyrotechnic ensimini ka wezindela, ngakho ukuqhuma kwakuzwakala e Saga lobunhloli, wezwa ngaphakathi kwezindonga zawo.
Zonke abadlali yochungechunge "Umphostoli" enozwelo isimo futhi wazama ukugwema noma iyiphi izinyathelo okungalungile.
Ukuqhuma uqobo wanquma ukuthatha ku osebeni echibini elincane, okuyinto etholakala eduze sezindela. Ngenxa yale njongo, amalitha 60 u-diesel, okuyinto yamila nangomsindo umsindo ovala izindlebe wokudubula ukuthi izisebenzi inqanyuliwe omakhalekhukhwini kanye amakhamera, futhi iseduze ngezimoto ziyohewula alamu. Lapho, phezu kolwandle, isuswe ukukhazimula obomvu-orange yomlilo futhi eqoshiwe umsindo. Ngqo ezindongeni sezindela abangu ngokudubula izinkukhu, okuyinto ngimuke kuzo zonke izinhlangothi ngokufutha komoya. Ngesikhathi ngesikathi izinyoni kwakufanele ngimuke umoya ake aphume izimpaphe phansi pillows abavamile. Abadlali yochungechunge "Umphostoli" zaziphonswa isiqephu sezwe, sengathi izingcezu babewa kuthelwe phezu kwabo amanzi ukuqhuma. Bese ososayensi computer kuhlangene lezi ukuqhuma sezindela isithombe.
Lesi sigameko lokugcina
iziqephu kwakamuva okudalwe Tunisia. Umsebenzi wawunzima, ngoba sokudubula angaphandle - akuwona neze umsebenzi olula. It has imithetho yayo siqu futhi inkinga main - kuyinto ukuthi akuyona yonke into incike nabalingisi abaqondisi. Lonke iqembu yayiseshidini nesimiso tight, ngakho ikhishiwe ukusuka kuhlwa kuya kokusa. Akekho akazange abe nesikhathi nje ukujabulela ubuhle bemvelo, ulwandle efudumele. I simo aqala izinguquko ezithile, ngakho ezinye izigcawu yasungulwa futhi reworked ekuhambeni. Ngakho sase kokuqeda ngokudubula ochungechungeni TV "Umphostoli." Abalingisi kanye ngokushesha wabonisa izimangaliso isivinini kanye nekhono - akazange akhononde, kodwa wazama ngangokunokwenzeka ukugcwalisa zonke izidingo umqondisi.
Ukuphela ethile yomlando avalelwe ukuze izilaleli kuze kube yilapho owokugcina imizuzu emihlanu Akucaci ukuthi ubani lo villain main.
Ngakho ngithola "Umphostoli", uchungechunge ithelevishini. Nabalingisi indima badlale kuleli Saga, bebelokhu ngempela, njengoba uma zonke izinhlamvu babehlala endaweni ethile eendleleni eziseduze noma amagceke angomakhelwane.
Monika Beluchchi. Ukuphakama nesisindo actress ezidumile imodeli. biography
Olga Dibtseva - inkanyezi Russian uchungechunge
Wen phezu umthondo: izimbangela kanye nokwelashwa
Amaseli Solar: isenzo kanye kwenkululeko isimiso
Ukutshala utamatisi endle futhi abamba ukushisa. amathiphu balimi
Kuthinta Pygmalion kwengqondo, pedagogy noma ukuphathwa